स्वास्नीको बिहे-कथा - Action Khabar - Nepali Online News Portal
राजनीतिक कोपभाजनको सिकार भएर म यस्तो दुर्गम ठाउँमा सरुवा भएँ कि के भनूँ ! त्यहाँको हावापानी र परिश्रमी मान्छेबाहेक सबथोक मन नपर्ने । बाह्र महिना हात पाखुरा चलाउँदासमेत छ महिना खान धौधौ पर्ने भिरालो र ढुङ्गेनी पङ्खर बारी । सिँचाइको अभावमा लगाइएका बालीनाली सुकेनास लागेको शिशुजस्ता देखिन्थे ।
जिन्दगी जिउन सारै कष्टकर र उदास उदास अनुहारहरू कहिले यता त कहिले उता दौडिरहेका भेटिन्थे । साँझ परेपछि रक्सीले टिल्ल भएर आउने अधिकांश लोग्नेले स्वास्नी कुट्थे र बहादुरी देखाउँथे । अनि कम कुटाइ भेट्ने महिलाहरू आफूलाई भाग्यमानी ठान्दथे । म यो नौलो परिवेशमा रमाएको थिएँ कि हराएको थिएँ आफैलाई राम्रोसँग थाहा थिएन ।
उसले सोच्यो, यो कुनै ठूलाबडाकै काजभोज हुनुपर्छ । जो पायो त्यहीले यत्रो धुमधामका साथ काँ यसरी खर्च गर्न सक्छ र ! जे होस् वर्षौदेखिको भोक आजै मेटिएझैँ लाग्यो उसलाई । पेट छाम्यो, पुटुक्क उक्सिएको थियो । सबैतिरबाट विचार गरिल्यायो र अन्तिममा भोजको आयोजकलाई हृदयबाटै धन्यवाद दियो । हिँड्ने बेला उसलाई एउटा अर्को सोच आयो; जुन मनासिब नै थियो । धक फुकाएर मनैदेखि भोजको आयोजना गर्ने र यसको केन्द्रीय आकर्षण जो धेरै मान्छेहरूको भीडको बीचमा भएजस्तो ठानेर ऊ त्यतै लाग्यो ।
मिष्ठान्न परिकारले जिब्रो लठ्याइदिने, निशुल्करूपमा मनले मागेको भरपेट खान दिने मनकारी धर्मात्मा सज्जनवृन्दको दर्शन नगरी जानू त शोभनीय हुँदैन भन्ने ठान्यो उसले । भीड छिचोल्दै उसले सकेसम्म घाँटी तन्क्याएर सबैले हेरेतिर हेर्यो । सोफामा बिराजमान युगल जोडी जो मुस्कुराउँदै मान्यजनबाट आशिर्वाद ग्रहण गर्दै थिए ।
- १ जेष्ठ २०७८, शनिबार १३:२२ मा प्रकाशित